Chii chinonzi SWAP? | Ehupfumi Zvemari
SWAP ndicho chidimbu chechibvumirano chisati chazivikanwa zvishoma nevamwe vamiririri munyika yemari. Kunyanya, zvinoreva chibvumirano chemari pakati pemapati maviri anobvumirana kuchinjanisa mari inoyerera ramangwana maererano nefomula yakatangwa. Icho chigadzirwa chakati omei uye chimwe icho chikamu chikuru chevashandisi vanoshanda mumisika yemari vasina kujaira kushanda. Imwe yemaitiro ayo akakosha ndeyekuti iyo SWAP inogona kuitiswa kuchinjana kuyerera mune dzimwe mari dzepasirese. Mune ino kesi, iwe unofanirwa kudoma izvo zviri zviviri mari uyezve yavo inotevera kuverenga.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvechibvumirano ichi chemari ndechekuti inofanirwa kuve nehupfumi kukosha kutanga nayo. Icho chirevo chako chekutanga kuti uchinzwisise nenzira kwayo sezvo chichava chisarudzo chekupinda kana kubuda mairi, chero iyo kuzvipira nemapato ese yeichi chiito chemari. Kubva pane ino mamiriro, ichi chibvumirano chakakosha chatiri kutaura nezvacho chinoonekwa sechakakosha nekuti icho chinobva.
Chokwadi, chaizvo SWAP ndeye zvigadzirwa zvemari mune ramangwana kuchinjana kwakabatana nemutengo wemari. Izvo chaizvo muchikamu chino kwaunogona kuita kuti mashandiro abatsire uye uwane purofiti mu mafambiro akazaruka, kunyangwe iri munzira yakaoma kunzwisisa kupfuura kupfuura zvigadzirwa zvemari zvechinyakare. Hazvishamisi kuti mhando dzemakondirakiti pakati pemapato maviri dzinoitirwa chimiro chakanangwa nevashandisi uye chokwadi havazi vese vane hanya neiyi chaiyo nzira yekushanda.
1 SWAP: ndezvipi zvinangwa zvacho?
2 Makirasi ezvigadzirwa zvemari
3 Commodity swaps
4 Stock index swaps
5 Icho chigadzirwa chakaomesesa
6 Ruzivo rwechigadzirwa
SWAP: ndezvipi zvinangwa zvacho?
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuziva kuti zvibvumirano zvemari izvi zvine zvinangwa zvakakosha uye kuti ndizvo zvichave zvinonyatsotsanangura mashandiro avo. Iwe unoda kuvaziva here kuti vanzwisise zviri nani chimiro chavo? Zvakanaka, chimwe chazvo ndecheizvozvo kunoderedza kushomeka yemitero yemitero. Izvi mukuita zvinoreva kuti unomhanyisa njodzi yekutora zvido zvinoshungurudza kana zvirinani zvakajeka. Kubva pane ino maonero, icho chinobatsira kwazvo chigadzirwa kune rako bhizinesi zvido uye kunyangwe kubva kune yekudyara maonero.
Chimwe chinhu chinomiririra SWAP ndechekuti mashandisiro acho anoderedza zvakanyanya njodzi dzechikwereti. Ichi chinhu chichave chaitika kwauri uine imwe frequency neyemari mitsara iwe yawakabatirana kusvika zvino. Zvakanaka, izvi hazviitike kwauri neichi chinobva mune zvemari kana zvirinani nesimba rimwe chete. Nekuti zvakare zvinoreva kuti mune mashandiro aunosimudzira kusvika zvino iyo njodzi dzemari ivo vachatonyanya kushomeka. Hazvishamise kuti, zvakaoma kwazvo kuti iwe hauna rutsigiro rwemari. Naizvozvo, kukosha kwakawedzerwa kweaya anonzi maSAPAP ndeekuti ivo vanogadzira chengetedzo huru kwauri mune yega yega mashandiro anoitwa.
Makirasi ezvigadzirwa zvemari
Kana izvi zvigadzirwa zvemari zvakasarudzika zvichizivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti zvinoshanduka kupfuura vamwe. Izvi zvinorevei chaizvo? Zvakanaka, chimwe chinhu chiri nyore senge une mamodheru akati wandei ekushandisa kubva ikozvino. Iwe hausi kutarisana neiyo hermetic uye homogeneous modhi iyo inogumira chete kuchinangwa chimwe chete. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unowana akati wandei marudzi eaya akakosha zvigadzirwa, sezvo iwe uchizokwanisa kuona pazasi. Kwete pasina, ine akawanda mamwe mafomu iyo yaunogona kufungidzira kubva pakutanga.
Ehezve, iyo yakajairika SWAP yezvose ndeye yakabatana neiyo chikwata chechibereko. Kusvika pakuti nguva zhinji pese patinotaura nezvechinhu ichi tiri kutaura nezveichi chemari. Kubva pane ino mamiriro ese, hapana mubvunzo kuti kuyerera kwechimbichimbi kwakatsinhaniswa, nemari imwe chete uye nemisi yakatenderanwa nemapato. Uyu ndiwo musiyano wayo mukuru zvine chekuita nemamwe ma link aunozoona pazasi. Kunyangwe vese vari mukati mekondirakiti inomiririra ichi chinobva mune zvemari panguva ino.
Iyo imwe modhi iri kuwana kukosha nekuwedzera kukosha uye inosanganawo nezita rayo rekutanga sezvazviri zvigadzirwa swaps. Mune ino chaiyo kesi, mashandiro ayo akafanana chaizvo neayo emari yemubereko yatakambotaura nezvayo pakutanga. Kunyangwe ivo vari akateedzana ekutenda ayo anoratidza ichi chibvumirano chitsva chemari. Saka kuti uvanzwisise zvirinani zvirinani, isu tinokuudza kuti uku kutengeserana kuchinjana mari zvichibva pamutengo wegoridhe. Ichokwadi kuti tataura yero simbi, asi inogona kunge iri imwe mbishi zvinhu. Semuenzaniso, sirivheri, mafuta, platinamu kana chero imwe mari yemari yeaya akasarudzika maitiro.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti zvigadzirwa swaps zvinotevedzera zvakafanana chimiro senge mune yapfuura modhi. Ndokunge, iri mukutarisira kuripa misiyano muiyo mutengo unoshanduka (musika) uye mutengo wakasimbiswa (wakatemwa) muchibvumirano. Uku kupesana kusiri pachena uko kunoita kuti chigadzirwa chemari ichi chive chisina kujeka. Kunyangwe iri zvakare ichokwadi kuti yakaoma kwazvo kushanda nayo. Kunyanya kana iwe usina iyo chaiyo rovedzo yekuona chaiyo kushanda. Nekuti chero kukanganiswa kuverenga kunogona kuita kuti iwe urasikirwe nemari yakawanda kubva zvino zvichienda mberi. Usakanganwe kubva zvino zvichienda mberi kana iwe usiri kuda kutora kushamisika kushamisika muhupenyu hwako.
Ehezve, isu takatarisana nechimwe chezvibvumirano zvakagadziriswa pane zvese nekuda kwekudyara kwainoita. Nekuti zvirokwazvo, kana izvi zvigadzirwa zvinogadzirwa zvichizivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti dzinokutendera iwe kuchinjana, nenzira imwecheteyo seimwe swaps dzataurwa pamusoro, mashandiro emusika wemari wekuita kwemusika wemasheya. Nenzira iyi, iyo stock performance zvinoreva misiyano seakasiyana uye akakosha sehuwandu hwezvikamu zvakagamuchirwa kana mibairo yemari, pakati pezvimwe zvakakosha.
Chero zvazvingaitika, usafunge kuti uri kutarisana nemhando yechinyakare, nekuti haina kudaro. Asi, ichi chibvumirano chakaomesesa kupfuura inogona kukugadzira inopfuura rimwe dambudziko kwauri kana usati wajaira kushanda nerudzi urwu rwezvigadzirwa zvemari. Hazvishamise kuti chero kukundikana kunogona kukukonzera kuti usiye maeuro mazhinji mumugwagwa kubva zvino zvichienda mberi. Chero zvazvingaitika, hazvina kufanana nekutenga nekutengesa zvikamu pamusika wekutengesa. Izvo hazvina chekuita nazvo sezvo ivo vachitanga kubva zvachose zvakapesana chaizvo.
Icho chigadzirwa chakaomesesa
Chero zvazvingaitika, isu tiri kutarisa kune chakasiyana chakasiyana chigadzirwa chemari. Iko pasina kupokana kuti inoitirwa kuita hombe kudyara. Kana iwe uri mudiki uye wepakati investor, zviri nani kuti iwe ukanganwe nezve iyi modhi nekuti haufe wakazviroja iyo nekuda kwayo yakasarudzika maitiro Kubva pane ino maonero, inoshandiswa mune zvese zviitiko sekunge yaive inishuwarenzi kupokana nekuwedzera kwezvibereko. Zvekuti nenzira iyi, mutengi anogona kuzvidzivirira mune zvemari kubva kungangoitika shanduko dzinogona kuitika mune ramangwana uye dzinogona kukanganisa kudyara kwake.
Mupfungwa iyi, zvinoitwa nekirasi ino yezvinhu zvemari kukudzivirira, asi iwe unofanirwa kuishandisa nenzira kwayo uye nguva dzose pamari hombe yemari. Izvo hazviitwe kune madiki madiki ekuchengetedza nzvimbo, sezvinoitika mune yakatarwa-temu dhipoziti, mabhangi ekuvimbisa manotsi uye kunyangwe mune mazhinji zvigadzirwa zvichibva pamisika yemari. Hazvishamisi kuti hunhu hwayo hukuru hwakavakirwa pachokwadi chekuti mutengo wayo unobva mukukosha kweimwe pfuma inogona kunge iri zvisungo, mari, njodzi yechikwereti kana mitengo yechimbadzo iyo inonzi ndiyo yakadzika. Iyi ingangoita mupiro wake wakanyanya kune chikamu chekudyara.
Chekupedzisira, haugone kukanganwa kuti masangano ezvemari anofanirwa kuzivisa nemazvo chigadzirwa ichi. Nekuti kuzivisa hakuna kukwana uye nekupa mabrochure anodiwa, sevhisi inofanirwa kuenda kumberi. Kusvika pakuti icho chigadzirwa hachina hanya nevatengesi vese. Kwete zvakati wandei uye nekuda kweichi chikonzero ivo vanofanirwa kukuyambira chaizvo zvakajeka kuti iwe urege kuwira mukukanganisa kwakakomba kwaunogona kuzvidemba mazuva mashoma mushure mekuhaya kwako. Hazvishamisi kuti isu tiri kutaura nezve chigadzirwa chemari chine njodzi dzakawanda dzisiri kuitika uye izvo zvakaoma kwazvo kushandisa, chero zvodini.
Kune rimwe divi, inogona zvakare kugadzira makakatanwa epamutemo semhedzisiro yemabhengi maitiro mukushandisa kwayo. Kusvikira pakuti vamwe veavo vakakanganiswa vanokumbira kushomeka kwechibvumirano nekuda kwekukanganisa kwemvumo. Sezvazvakaitika mumakore achangopfuura uye izvo zvakavaita kuti vave nehungwaru hwakawanda panguva yekuhaya. Nekuti pakupera kwezuva, zvakave nemhedzisiro inokanganisa zvido zvevanhu ava. Nekuti ivo vaive vasiri chigadzirwa chemari chakagadzirirwa ivo. Naizvozvo, chenjedzo ndiyo inofanirwa kuve dhinomineta yezviito zvako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chii chinonzi SWAP?